About Us - Hangzhou Poly Kala Air Qalabka Co., Ltd
Kala Hangzhou Poly Air Qalabka ManufacturingCo., Ltd waa soo saaraha xirfadle oo soo saarta qalabka nitrogen PSA qaadashada, oxygen PSA qalab samaynta, VPSA qalab samaynta oxygen, Tifaftirayaasha qalabka saabsanaa isdaahirinta hawada iwm
Shirkadda weheliso R & D, wax soo saarka design iyo suuq. xaq u leh xaaladaha soo-saarka kaamil ah, qalabka lagu rakibo, qaabeynta, dayactirka iyo adeeg. Waxa kale oo ay kiraystaan ​​khabiir berrinkii qalab iyo injineernimada cusub thermodynamics sida la taliye farsamo si loo hubiyo in alaabta iyo farsamo waa had iyo jeer in line of technology oo la siiyo damaanad lagu kalsoonaan karo iyo sayniska ee design wax soo saarka iyo warshadaha. separation hawada Sinopoly ayaa noqonaya hogaamiye farsamo ee khadka isdaahirinta hawada tilmaantay Tifaftirayaasha iyo adsorption lulid cadaadis.
waxyaabaha Company ayaa inta badan u kala qaybiyey, nitrogen PSA (oxygen) Qalabka, VPSA qalabka oxygen gorfaynta, qalabka saabsanaa isdaahirinta gaaska vacuum, nitrogen-soociddiisa xuub (oxygen) qalabka, Xayiraadda qalajiyaha, micro qalajiyaha regenerative kulaylka, qalajiyaha regenerative heatless, qalajiyaha regenerative kulaylka, filter iyo kale toban taxane ah caddaymaha. Products hubkaas ayaa loo isticmaalaa in batroolka, kiimikada, koronto, warshadaha kiimikada, warshadaha metallurgy, warshadaha dhuxusha, wershedaha dawooyinka, aerospace, warshadaha baabuurta, warshadaha balaastigga, fiber kiimikada, caag, warshadaha galaas, warshadaha cuntada, warshadaha elektarooniga ah iyo naaxinta iyo beeraha kale .
Company waxa uu ku yaalaa Fuyang Gaoqiao Industrial park, ku xiga si ay Hangzhou West gudubno, webiga Fuchun, gudubno Qiandao iyo meelaha kale ee qaranka ee danaha.
Company Tenet: iimaanka wanaagsan doonaya ah horumarinta tayada wanaagsan doonaya for astaanta ah, aaminsan wanaagsan doonaya inay ka adeegaan.
Our adeegga Tenet: qancinta macaamiisha waa raacdada weligeed ganacsi ee!
Fakis: +86 571 6343 0098